Hei Twitter, Ndakaedza Ads uye Hezvino Zvakaitika | Martech Zone
Hei Twitter, Ndakaedza Ads uye Hezvinoi Zvakaitika
Wednesday, May 18, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Ndakaverenga wongororo dzakavhenganiswa paTwitter Kushambadzira. Ndisina kuishandisa ini, ndakafunga kuti zvingave zvakakodzera kupa pfuti. Ndinoda kukwezva vamwe vanhu kune Yekushambadzira Technology Twitter account uye ini ndaida kuona kuti kana mamwe ma ads angabatsira. Ndinofungidzira ini handisi kuzowana.
Hei @TwitterAds, ndakaedza kushandisa mari newe asi hauna kunditendera
Ini ndakanyatsofamba nenzira dzekusefa kutapudza vateereri vangu. Ini ndakasarudza Kushambadzira seboka, ndikaisa mamwe mazwi kubva kumatunhu edu kunongedzera, uye ndikatopa mamwe maakaundi gumi nemaviri evashandisi kuyedza kukwezva vateveri vavo futi.
Pandakapedza kunongedza, ndakapihwa mukana wekusarudza imwe yeTweets yangu, kana kuvaka yangu. Ndakasarudza kugadzira zvangu. Zvekare… Ndakapedza nguva yakati rebei ndichigadzira meseji kuti ndiedze uye nemufananidzo wakanaka wayo.
Uyezve ini ndakaedza kutsikisa iyo Twitter Kadhi… tarisa iko kukanganisa:
Hapana dambudziko, ndinodaro kwandiri. Ndakaona kuti pane bhatani rekuchengetedza kusevha mushandirapamwe wako kumusoro kurudyi. Saka, ini ndinodzvanya kusevha uye… ona iko kukanganisa:
Ini handina kana zano rekuita izvozvi. Ini handigone kusevha rese rebasa randakaita ndakanangisa mushandirapamwe uye handigone kusevha rese basa randakaita pane rekugadzira
Tags: Twittertwitter kushambadza kunokundikanatwitter adstwitter kushambadziratwitter yekugadzira inokundikanatwitter inokundikana
gShift: Yenyaya Yekudzidza mu SaaS Onboarding Yakanakisa Maitiro
Kuwedzeredzwa uye Virtual Reality Ichave Iyo Inofanirwa mune Zvekutengesa
Hausi wega! Ini ndinomhanyisa kushambadzira kwe Twitter, nguva nenguva zvangu, kunyanya kune vatengi uye ichokwadi, buggy chaizvo. Ndaizivikanwa kuti ndinofamba nehasha nguva nenguva. Vanofanira kunyatsogadzirisa izvi kana vachizoita mari.